Ankavandra : Karamaina 5000ar isan’olona ny dahalo mba tsy hanafika
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Ankavandra : Karamaina 5000ar isan’olona ny dahalo mba tsy hanafika
Zava-doza no mitranga any Ankavandra ao amin’ity kaominina ao Miandrivazo ity. Tsy maintsy avy aty Tsiroanomandidy no làlana vao tonga any Ankavandra ao amin’ny distrikan’i Miandrivazo. Miala 1500 mianatsimo avy ao Tsiroanomandidy no mihazo amin’izany toerana izany. Toerana be omby sy mahavokatra ary manana harena ankibon’ny tany marobe. Miaina ao anatin’ny tebiteby andro aman’alina nefa ny mponina ao amin’ity kaominina ity. Tsy andro tsy alina hoy ny fitenenana fa tandindonon’ny fanafihana foana ity toerana ity. Tsy misy fiarakodia mitatitra olona any fa tsy maintsy miaraka amin’ny fiarabe mpitatitra entana raha ho any na mandeha an-tongotra anjatony km. Amin’izao fotoanan’ny mainandro izao no tonga any ny fiarabe izay mamatsy entana hampiasana mandritry ny enim-bolana manomboka amin’ny oktobra ka hatramin’ny martsa. 50 000Ariary no saran-dàlana amin’izany. Zara raha mahita fiara amin’izany ary mifangaro amin’ny entana amin’izany ny mpandeha. Tany amin’ity faritra ity no nahafaty an’i Rasoakinina ilay mpanakanto iny raha handeha hoany Antsalova izy ka nivadika ny kamiaô nitondra azy noho ny haratsin’ny làlana.
Ny tena zava-doza dia tsy maintsy manarama dahalo ny mpanana fiarakodia raha hoany amin’ity toerana ity ka alaina any amin’ny mpandeha izany. 5000ariary (25 000fmg) isan’olona no anankaramana ny dahalo hiambina eny an-dàlana amin’izany. Rehefa ny dahalo no mi-“escorte” ny fiara dia tsy misy manafika ka mba tonga any Ankavandra. Misy olona hatrany amin’ny 30 ka 50 no miaraka mandeha amin’izany. Iray andro mahery vao tonga any amin’ity toerana ity amin’izao fotoana izao.
Izany no iainan’ny mponina any amin’ity toerana ity. Mba eritrereto amin’izany ny fijaliana sy ny tebiteby mihantra amin’ny olona any amin’ity toerana ity. Tena tsy misy fanjakana tanteraka ny fa ny dahalo sy ny olon-dratsy manjaka. Fa aiza ny fanjakana hoy ny fitenenana?
Tamin’ny alatsinainy faha 07 aogositra 2017 lasa teo dia voatery niverin-dàlana ny fiara 4X4 miisa roa an’ny fiangonana FJKM ( Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara). Notafihin’ny dahalo izy ireo ka norobainy avokoa ny entana tian’izy ireo. Tsy afaka nanohy ny làlana intsony ireto mpivavaka izay nikasa hamonjy fihaonana tamin’ny mpiandry tany amin’ity toerana ity.
Tapa-bolana lasa izay dia mbola voatafika tany koa ny tompon’andraikitra iray tao amin’ny fiangonana ity ka niverin-dàlana ihany koa.
Araka ny voalazan’ny loharanom-baovao dia voatafikin’ny dahalo matetika ny tanàna ao Ankavandra. Malemy eo anatrehan’ny dahalo ny zandary any an-toerana izay tarihin’ny lietnà iray. Ny dahalo no manjakazaka ao an-tanàna hoy hatrany ny loharanom-baovao. Miangavy ny fanjakana mba hijery ity toerana ity ny mponina. Tena miaina ao anatin’ny aizina tanteraka ity toerana ity amin’izao fotoana izao. Tsy tenenina intsony ny asan-dahalo hoy izy namarana ny fitantarany.